Burmese - How can groups make good decisions? | Amara
← အစုအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်းတွေရအောင် ဘယ်လို လုပ်နိုင်သလဲ။
အားလုံးသိပြီး ဖြစ်ကြတဲ့အတိုင်း အစုအဝေးနဲ့ ဆုံးဖြတ်ကြတဲ့အခါ အမြဲတမ်း မမှန်နိုင်ပါဘူး။ တစ်ခါတစ်လေ မှားတောင် မှားနိုင်ပါသေးတယ်။ အုပ်စုလိုက် ဆုံးဖြတ်ချက် ကောင်းကောင်းရနိုင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ Mariano Sigman နဲ့ သူ့ရဲ့ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက် Dan Arielyတို့ဟာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပြုလုပ်နိုင်ထို့ ကျွန်မတို့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ဘယ်လိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ ကမ္ဘာအနှံ့ စမ်းသပ်မှုလေးတွေ ပြုလုပ်လျှက် ရှိပါတယ်။
အခုဒီမှာဖေါ်ပြထားတဲ့ အချက်အလက်တွေ ပြည့်နေတဲ့ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ရှင်းလင်းပြောဆိုချက်ထဲမှာ သူတွေ့ရှိထားတဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ရလဒ်တွေနဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေး စနစ်တွေအပေါ်မှာ ဘယ်လို သက်ရောက်မှု ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာ ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။ Sigman က တချိန်မှာ လူတွေဟာ ပိုပြီးတူညီတဲ့ ဦးတည်ချက်ရှိလာတဲ့အခါ အုပ်စုတွေအနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု ချမှတ်နိုင်ဖို့ ဘယ်လို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းကြတယ် ဆိုတာပိုနားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ကို တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်းအသစ်တွေကို မြင်နိုင်လာပါလိမ့်မယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
Showing Revision 76 created 02/03/2018 by sann tint.
အစုအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်းတွေရအောင် ဘယ်လို လုပ်နိုင်သလဲ။
ဆုံးဖြတ်ကောင်းတွေ ဘယ်လို ချမှတ်လဲ။
သုတေသနက ပြတာက လွတ်လပ်တဲ့စဉ်းစားမှု
ရှိရာမှာ လူစုတွေဟာ အမြှော်အမြင်ရှိတယ်။
ဒါကြောင့်ပဲ အချင်းချင်း ဖိအားပေးမှု၊
လူစုတစ်စုဟာ အချင်းချင်း အသိပညာ ဖလှယ်နိုင်
အချင်းချင်းပြောဆိုတာက အဖွဲ့လိုက် ဆုံးဖြတ်
ချက်ချရာမှာ ကူညီလား(သို့) ဟန့်တားလား
Dan Ariely နဲ့
မကြာခင်က ကမ္ဘာ့နေရာ အတော်များများမှာ
ဒီအကြောင်းကို စတင် စူးစမ်းခဲ့တယ်။
နည်းလမ်းတကျနဲ့ အချက်အလက်တွေ ဖလှယ်မှုကို
အားပေးတဲ့ အုပ်စုလေးတွေ ခွဲပြီး
လက်တွေ့ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကို Argentina က
Buenos Aires မှာ လုပ်ခဲ့တယ်။
လူတစ်သောင်းကျော်ပါဝင်တဲ့ TEDx ပွဲအနေနဲ့ပါ။
အီဖယ် မျှော်စင် ရဲ့ အမြင့်က ဘယ်လောက်ရှိလဲ
"Yesterday" ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ
Beatles ရဲ့ "Yesterday" ဆိုတဲ့သီချင်းမှာ
ပြီးတော့ ငါးယောက်အဖွဲ့လေးတွေ ခွဲပြီး
ကျွန်တော်တို့ တွေ့ရှိရတာက အဖွဲ့လိုက်
ရှင်းလင်းတဲ့ အဖြေတွေရှိတဲ့ ပြဿနာတွေကို
အသုံးဝင်မယ့် နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်နိုင်တယ်
ဒါပေမဲ့ ဒီလို အဖွဲ့လေးတွေခွဲကာ စဉ်းစားလို့
ရတဲ့အဖြေကို စုပေါင်းကြည့်တဲ့ နည်းလမ်းဟာ
လူမျိုးရေး၊ နိုင်ငံရေး ကိစ္စတွေကို
ဒီတစ်ကြိမ် ဒါကို TED ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာ
MS: ခင်ဗျားတို့ အနာဂတ်ရဲ့
ကိုယ်ကျင့်ဆိုင်ရာ အကျပ်ရိုက်မှု ၂ ခု
ကျွန်တော်တို့ ဆုံးဖြတ်ရမယ့် အရာတွေပါ၊
လက်ခံသင့်၊ မသင့် သင်ထင်တာ
ဆုံးဖြတ်ဖို့ အချိန် စက္ကန့် ၂၀ ပေးပါ့မယ်။
(Dan Ariley) သုတေသီတစ်ဦးဟာ
သုတေသန ပညာရှင် AI ကို
တစ်နေ့မှာတော့ AI က အပိတ်
သုတေသီဟာ အံ့ဩသွားပြီး ယုံကြည်သွားတာက
AI ဟာသူ့ကိုယ်သူ သတိထားမိစေဖို့
MS: ဒီနောက် ပါဝင်သူတွေကို
အမှတ် ၀ က ၁၀ အထိပေးကာ
သူတို့ကို ထပ် မေးခဲ့သေးတာက သူတို့အဖြေအပေါ်
(MS) ကုမ္မဏီတစ်ခုက သန္ဓေအောင်တဲ့ မျိုးဥ
တွေယူပြီး မျိုးရိုးဗီဇ အနည်းငယ်ကွဲတဲ့
အဲဒီလို ကုမ္ပဏီက လုပ်နေတာက...
အမှတ် သုညကနေ တစ်ဆယ်အထိပေးမယ်ဆိုရင်
သုညကနေ ၁၀ ကိုယ့်ယုံကြည်မှုမှာ
အပြုအမူက လုံးဝ မှားတယ်လို့
သူ့ဘေးနားက လူတစ်ယောက်ဟာ အဲဒါကိုပဲ
လူတွေ ဘယ်လောက်တောင် ကွဲပြားနိုင်ပုံပါ။
TED မှာရှိတဲ့လူ အများစုက ထင်တာက
AI ရဲ့ခံစားမှုကို လျစ်လျူရှုပြီး
(MS) နှစ်မိနစ် ဆွေးနွေးပါ။
MS: အဲဒီမှာ အဖွဲ့တော်တော်များများဟာ
လုံးဝကို အမြင်မတူသူတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထား
သဘောတူညီချက်ရတဲ့အဖွဲ့ မရတဲ့အဖွဲ့ ဘာများ
တစ်ခုခုကို အမှန်၊အမှား သိပ်မသချောတော့
ထင်တာက ယုံကြည်မှုမြင့့်တဲ့ မီးခိုးရောင်
တွေဟာ အဆိုပြုချက်နှစ်ခုလုံး သူ့ဟာနဲ့သူ
320397 5:20 - 5:22
သူတို့ မပြတ်သားတာက မသေချာလို့မဟုတ်ပဲ
ဒါ့အပြင် ကျွန်တော်တို့ တွေ့ရှိတာက
ယုံကြည်မှု မြင့်မားတဲ့ မီးခိုးရောင်တွေဟာ
ဒါတွေက ပထမဆုံး စမ်းသပ်ချက်တွေဖြစ်ပြီး
341275 5:41 - 5:45
နားလည်ဖို့ အများကြီး ထပ်လိုဦးမယ်
ကဲ အုပ်စုတွေ သဘောတူညီမှုရတဲ့အခါ
အလိုလို စဉ်းစားမိမယ့် အဖြေတစ်ခုက
ပျှမ်းမျှ တစ်ခုကို ယူလိုက်ကြတာပဲမဟုတ်လား။
နောက်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်တာက ပြောတဲ့သူရဲ့
ယုံကြည်မှု အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး
အုပ်စုဟာ မဲတစ်ခုစီရဲ့ အားကို
Paul McCartney သာ ခင်ဗျား
ခင်ဗျားအနေနဲ့ သူပြောတဲ့ "Yesterday"
ဘယ်နှစ်ခါ ပါသလဲ ဆိုတာကို
ဒါနဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ ၉ခါပါတယ်ထင်တာပဲ။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ အမြဲသတိထားမိတာက
ဘယ်လို ကျဉ်းထဲ ကျပ်ထဲမှာမဆို
ဘယ်လို ကမ္ဘာ့ တိုက်ကြီးတွေမှာမဆို
အုပ်စုတွေအနေနဲ့ သေချာပြီး "စနစ်တကျ
အီဖယ် မျှော်စင်ရဲ့ အမြင့် ကိစ္စမှာ
မီတာ ၂၅၀၊ မီတာ ၂၀၀၊ မီတာ ၃၀၀၊ ၄၀၀ နဲ့
နောက် ၃၀၀ မီလီယံ မီတာဆိုပြီး လုံးဝ
မတိကျတဲ့ ကမောက်ကမ အဖြေတွေထွက်လာမယ်။
ဒါပေမဲ့ စနစ်တကျ ပျမ်းမျှတွက်တာက
အုပ်စုဟာ အလယ်လောက်က လူတွေရဲ့
Vancouver စမ်းသပ်မှုကို ပြန်ကြည်ရင်
ဒီအစား အများဆန္ဒ ဖြစ်သွားတာက
အဲဒါဟာ ပြောစရာမလိုပဲ အဖွဲ့ထဲမှာ
အဲဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့က ဘယ်လို ညှိနှိုင်း
ရမလဲဆိုတာ ဘာမှပြောစရာ မလိုခဲ့ပါဘူး။
ဒီတော့ ဒီကနေ ဘယ်လို သုံးသပ်မလဲ။
ဒါက အစပဲရှိသေးတယ် ဆိုပေမယ့်
အဖွဲ့လိုက် ထိရောက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ
ချဖို့ နှစ်ချက် လိုတယ်။
အဖွဲ့အစည်းတွေ သိအောင် လုပ်ကြတဲ့နည်းက
အမြင်တွေ အမျိုးမျိုးကွဲပြားတာ ကောင်းပါတယ်။
သူတို့ထင်တာ သူတို့ ပြောခွင့်ရအောင်
ဒါပေမယ့်လဲ အရမ်းကြီး ကောင်းတဲ့
မျှမျှတတ စဉ်းစားကြည်ဖို့ မတူတဲ့
ဒါပေမယ့် အီဖယ်လ် မျှော်စင် အမြင့် ကို
ညှိနှိုင်းကြရတာက ကိုယ်ကျင့်၊ နိုင်ငံရေးနဲ့
လူတွေက တူညီရာတစ်ခုကိုပဲ ဦးတည်လာတဲ့အခါ
ကျွန်တော်တို့ တုံ့လှယ်ပုံ၊ ဆုံးဖြတ်ပုံကို
နားလည်ဖို့ ကူညီတဲ့ သိပ္ပံပညာကိုအသုံးပြုတာက